Horseria | January 2020
Ugu Weyn Ee Horseria
Cunto-soosaarida miro-fareenta xilliga qaboobaha
In kaydka jiilaalka ee hostes kasta waxaa jira suxuun la kariyey ilaa malayga. Sababtoo ah joogitaanka khudradda ee qadar badan oo vitamiin ah iyo saliida lagama maarmaanka ah, asalkani wuxuu leeyahay bogsiin. Waxaa jira boqolaal siyaabood oo loo kariyo malayga. Root waxaa loo adeegsadaa karinta. Tixgeli hababka aasaasiga ah ee diyaarinta fuushanka jiilaalka.
Talooyin ku saabsan malayga koraya: beeritaanka iyo daryeelka
Horseria waa dhir foosha ah ee qoyska Kabbashka. Ciriiri ah xidid adag oo weyn, stem toosan oo cufan, caleemo waaweyn. Maydka beeraha - Gobollada Southeastern, maanta ayaa loo qaybiyay Aasiya, Yurub (marka laga reebo meelaha kulaylaha) iyo Ameerika.
Sida loo kariyo qashinka jiilaalka ee guriga
Cuntooyin badan ayaa lagu iibin doonaa suugo basbaas ah, taas, iyada oo ay uga mahadcelinayso mid ka mid ah maaddooyinka, waxa la siiyey magaca "boogo". Nolol maalmeedka, wali waa ay yaqaanaan sida cirfiidka, ganacsade fardaha ah, isha ku haya, adjika caan ah, a cobra, cunto fudud. Laakiin wax kasta oo magacyada dadka ay isku dayeen in ay soo gudbiyaan sharafnimada ee xawaashka, ka kooban iyo dhadhankiisa ayaan wali la beddelin.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Horseria 2020